၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပို့ကုန် သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင် ကတ်နှင့် ဆက်စပ်ကတ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ပါမစ် များအား Online စနစ်ဖြင့်...
ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ကတ်နှင့် ဆက်စပ်ကတ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပို့ကုန်သွင်း ကုန် လိုင်စင် ပါမစ်များအား Online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားထုတ်ပေးနိုင်မည့် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အား စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း( Soft Launch) အခမ်းအနားအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့၊ (၁၃:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ Zoom Application ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် COVID-19 ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှု သက်သာစေရေးစီမံချက် (CERP) ပါ ပန်းတိုင် (၅) အောက်ရှိ Challenge Grant ပြိုင်ပွဲများအကြောင်းနှင့်...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဩစတြီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးဖြစ်သော ဦးမင်းသိမ်းအား ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌...
Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အား နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အဆင့်လိုက် လွှင့်တင်လျက်ရှိရာ Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ပထမအကြိမ်အသိပညာပေးရှင်းလင်းပွဲ အား (၂၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်အသိပညာပေးရှင်းလင်းခြင်းအား (၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်...
Announcement for Hiring National Experts
The Department of Trade (DoT), Ministry of Commerce (MoC), Republic of the Union of Myanmar
had receivedathree year grant under the Enhanced Integrated Framework (EIF) partnership for
LDCs, hosted by the World Trade Organization (WTO). The DoT is implementingaproject namely...
မြန်မာနိုင်ငံဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ EIF Tier2အဆင့်တွင် Myanmar Services Trade Enhancement Project – MSTEP အား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောက်ဖော်ြပပါ နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (၂) ဦးကို ငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-...
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံး ငွေရင်း (မူလ)ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းနိုင်ရန် ခေါ်ယူခြင်း
လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် နောက်တွဲယာဉ်များ သုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်များ လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့် အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းလွှာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း
Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြုမှု ဒုတိယအကြိမ်အသိပညာပေးရှင်းလင်းပွဲဖိတ်ကြားခြင်း
Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အား နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အဆင့်လိုက် လွှင့်တင်လျက်ရှိရာ Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွဲအား (၂၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထပ်မံ၍ ဒုတိယအကြိမ်အသိပညာပေးရှင်းလင်းခြင်းအား (၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက် (သောကြာနေ့) (၁၀ : ၀၀)...